Taariikhda Jeneraal Maxamed Cali Samatar oo habeenkii xalay ku geeriyooday dalka Mareykanka (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taariikhda Jeneraal Maxamed Cali Samatar oo habeenkii xalay ku geeriyooday dalka Mareykanka (AKHRISO)
Allaha u naxariistee waxaa habeenkii xalay gobolka Viriginia ee dalka Mareykanka gaar ahaan isbitaal ku yaala gobolkaasi ku geeriyooday Jeneraal Maxamed Cali Samatar oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii dowladii kacaanka ee Soomaaliya, isagoona sidoo kale xilal kala duwan soo qabtay.
Jeneraal Maxamed Cali Samatar ayaa sidoo kale ka mid ahaa madaxdii ugu sareeysay iyo ninkii labaad ee dowladii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, wuxuuna ka soo qabtay xilal kala duwan sida madaxweyne ku xigeen, wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidamada dalka iyo ra’iisul wasaare.
Allaha u naxariistee Jeneraal Maxamed Cali Samatar ayaa meel fiican ka gaaray darajada ciidanka,waxaana uu ahaa Sareeye Guud oo ah darajada ciidan mida ugu sareeysa Soomaaliya, waxaana sidoo kale lagu xusuustaa geesinimadii iyo dadaalkii dheeraa ee uu soo galay qaranimada Soomaaliyeed, wuxuuna ku dhintay da’da 85 sano.
Taariikh kooban oo aynu ka qornay Allaha u naxariistee Maxamed Cali Samatar
Allaha u naxariistee Jeneraal Maxamed Cali Samatar wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee dibadda waxbarasho u aadda, markay soo noqdeena iyagu dhisay ciidamadii qaranka, 21 Octoobar sanadkii 1969 wuxuu ka mid ahaa saraakiishii af-gembisay dowladii ra’yidka ahayd.
Wuxuu Jeneraal Maxamed Cali Samatar sidoo kale ka mid noqday golihii sare ee kacaanka raggii ugu muhiimsanaa, waa kuwii ka dhigay Soomaaliya dowlad casri ah oo la jaanqaadda nidaamkii dowliga ahaa, wuxuu waqti dheer ka ahaa dowladii kacaanka madaxwayne ku xigeenka kowaad iyo wasiirka gaashaandhigga, ugu dambayntii wuxuu noqday ra’iisul wasaarihii dowladii kacaanka.
Allaha u naxariistee Maxamed Cali Samatar wuxuu ahaa nin aad u fur-furan oo kasban kara qof kasta iyo bulsha kasta oo uu la kulmo, waana sarkaalkii ugu horeeysay ee Soomaali ah ee abid gaara derejada S/Guud, tan iyo derejooyinka sar-sare ee uu gaaray S/Guud Samatar, wuxuuna waxaas oo dhan ku gaaray aqoontiisa, xirfadiisa iyo kartidiisa uu u leeyahay shaqadiisa.
Jeneraal Maxamed Cali Samatar ayaa sidoo kale ka mid ahaa raggii ka dambeeyay horumar kasta oo uu wadankeenu gaaray xilligaas, wuxuuna ahaa kii dhisay ciidankii ugu xoogga waynaa uguna tababarka fiicanaa Afrikada madow, taas oo uu ku mutaystay in loogu yeero Jeneraal kii kowaad ee Afrika.
Allaha u naxariistee Maxamed Cali Samatar wuxuu ahaa nin fur-furan oo kasbada cid kasta oo ay kulmaan ama wada shaqayaan, taas ayaa waxay ka yeeshay nin ay aad u jecel yihiin dhamaan ciidamadii qaranka, ciidamada caadiga ahi waxay u jeclaayeen si aanay u jeclayn saraakiishii iyaga madaxda u ahayd markaas, taas oo had iyo jeer si xoog leh looga dareemi jiray ciidamada dhexdooda, sidoo kale wuxuu ahaa nin ay guud ahaan jeclaayeen shacabka Soomaaliyeed.
Dhinac kasta marka laga eego Jeneraal Maxamed Cali Samatar wuxuu ahaa nin dhex-dhexaad u ah ummadda Soomaaliyeed, hamigiisa keli ahina wuxuu ahaa siduu wadankiisa horumar u gaarsiin lahaa.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay geerida naxdinta lehayd ee ku timid Jeneraal Maxamed Cali Samatar.